ỌT REQUIRER REQUIRE ANYA ANYA chọrọ itinye aka na POLEMIQUE: Afọ 18
AKWỤKWỌ: ihe dị na nkebi a "POLEMIQUE" edebere maka ndị na-ege ntị, jide n'aka na ị nwere ma ọ dịkarịa ala 18 afọ tupu ịnweta ya.
IHE: naanị gị bụ maka onwe gị ma ọ bụrụ na ị kpebie ịnweta ya na "ỤLỌ" ... Ya mere emela mkpesa, tinye paswọọdụ « Afrike » iji kwado na ị bụ agadi na nghọta!
[passster paswọọdụ = ”AFRIKE”]
Umunne m ndi nwoke na ndi nwanyi n’echebara uche: umunne m ndi nwoke na ndi nwanyi n’ime ndi Oji asaa / ndi Africa ejidere aka “Ma na enyi (nwoke / nwoke ma obu nwanyi / nwanyi), umunne nwoke na nwanne nwanyi jidere aka, umuaka ndi otu ezinụlọ ahụ sara ọnụ ma mgbe ụfọdụ ha dinara n’otu àkwà »E nweghị mbunobi
November 17, 2020 07: 44 dịghị comments
Ugbu a, nke a bụ oge anyị mgbe anyị lebara anya n'Africa, na 70s, enweghị ajọ mbunobi a niile, na West ...	GỤKWUO
Eziokwu Eziokwu: N'agbanyeghị otu ị si maa mma, cheta na adaka na ozodimgba na-adọta ndị njem
November 17, 2020 05: 05 dịghị comments
Ma ị ka ibu ma ọ bụ karịa, ị gaghị enwe ike iwere onwe gị kpọga gị n'ili ma ọ bụ lie onwe gị. Ihe obula gi ...	GỤKWUO
November 15, 2020 00: 30 dịghị comments
Onye isi ala Putin nwere ụzọ nke ya iji nabata ndị ọbịa na isi ala. Nkịta ya bụ ndị na-eme ihe nkiri maka nke ahụ, ha na-egwu ...	GỤKWUO
Ihe ntụgharị uche na-agwa anyị: ndị nna nna anyị dị ebube, na-achọ ndụ dị elu, nweta njikọ nke ọdịdị dị elu na nke dị ala site na ịtụgharị uche n'okwu ndị dị elu "Ndị nna nna anyị, site n'ịtụgharị uche, mere njikọ dị n'etiti ọdịdị abụọ nke mmadụ ”
November 13, 2020 03: 33 dịghị comments
Iji kwuo eziokwu, na ntụgharị uche ọ dịghị nyocha echiche ma ọ bụ echiche a na-agbanye maka ebumnuche inweta ozi ...	GỤKWUO
Ọ bụ ihe ùgwù ịnwe frizzy, frizzy na curly ntutu: enwere puku na otu ihe kpatara ndị ji ajị ajị agba ịlaghachi ma ọ bụ jikọtakwa ihe ndị sitere n'okike
November 12, 2020 12: 12 dịghị comments
Frizzy, frizzy na curly ntutu nwere ọtụtụ uru: versdị ha dịgasị iche iche: ha bụ ntutu nwere ọtụtụ edozi isi, ya bụ ...	GỤKWUO
Jisos Kraist abughi ihe efu kari ndi nna nna gi: akuko banyere onye anakpo gi Jisos Kraist bu akuko, onwu ya na nbilite n’onwu ya bu ihe anakpo; ma ndị nna nna gị ha nwere ezigbo akụkọ ihe mere eme, nke a pụrụ igosi na nke e gosipụtara; na-enweghị njikọ ọ bụla na-eche n'echiche Onye Nzọpụta Jizọs Kraịst, ọbara ya enweghị ike imere gị ihe ọ bụla .. (VIDEO)
November 8, 2020 03: 33 dịghị comments
Ọbara mmadụ nke na-adịtụbeghị mbụ nwere ike ịgbapụta gị? Ọ dịghị ma ọlị, mana ndị nna nna gị nyere ọbara ha n'ezie ...	GỤKWUO
Na aha nke Akwụkwọ Nsọ, Torah na Koran: ọ bụ n'ihi atọ ndị a na-akpọ akwụkwọ nsọ dị iche iche ka a gbahapụrụ mmadụ Black / Africa dum, hapụrụ onwe ya; gụrụ akwụkwọ site na Baibul, Koran na Torah, ụkpụrụ ya na-agbagwoju anya
November 8, 2020 00: 00 dịghị comments
Lee ihe nhụsianya ọ bụụrụ ndị a bi na olileanya na-enweghị atụ na-eche nloghachi nke onye nzọpụta Mezaịa! Olile anya azuru efu, nke ...	GỤKWUO
November 7, 2020 00: 33 dịghị comments
Anyị esighị n’eluigwe daa. Anyị bụ ndị pụrụ iche, anyị bụ ụmụ nke ndị niile buru anyị ụzọ, ndị nna nna anyị. Na v ...	GỤKWUO
November 7, 2020 00: 20 dịghị comments
Ma oburu na emesia ibido ime nkpatu ma obu ma o na eme nkpatu ma tufu ya n’elu okpokoro, i gha ahu na umu anumanu abuo ...	GỤKWUO
Nọvemba 26 10: 22